Akụkọ Rebecca Clyde na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Rebecca Clyde?
Ọnye na -bụ Rebecca Clyde?
Rebecca Clyde bụ onye nchoputa na onye isi nke Botco.ai, mmalite na-enye nzụlite nkata nwere ọgụgụ isi maka ndị ahịa ahụike. N'ihe karịrị afọ 20 n'ịzụ ahịa dijitalụ na ụlọ ọrụ teknụzụ, ọ nwere oke mmasị n'ịkwalite ụmụ nwanyị na teknụzụ wee jee ozi dị ka onye isi nchịkwa maka Girlsmụ nwanyị na Tech Phoenix maka afọ 3. Tupu Botco.ai, Rebecca hiwere ụlọ ọrụ na -ere ahịa dijitalụ, Ideas Collide, ugbu a n'ime afọ 15 ya na -ejere ndị ahịa ụlọ ọrụ ụwa niile ozi. Ọ bụbu onye njikwa ahịa na Intel ma nwee MBA site na Mahadum steeti Arizona.
Igodo 3 iji wulite mmemme ịre ahịa nkata na -aga nke ọma
Tọzdee, Septemba 9, 2021 Tọzdee, Septemba 9, 2021 Ọnye na -bụ Rebecca Clyde?
Mkparịta ụka AI nwere ike mepee ụzọ maka ahụmịhe dijitalụ ka mma yana mmụba ndị ahịa. Mana ha nwekwara ike ị nweta ahụmịhe ndị ahịa gị. Nke a bụ otu esi enweta ya nke ọma. Ndị na-azụ ahịa taa na-atụ anya ka azụmaahịa na-ewepụta ahụmịhe nke onye chọrọ na awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu, ụbọchị 365 nke afọ. Ndị ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịgbasa ụzọ ha iji nye ndị ahịa njikwa ha na -achọ ma gbanwee mbata nke ọ na -abanye